အမျိုးသမီးများအတွက်ကျောပိုးအိတ်မဲ့ကြိုးမဲ့ဖြတ်တောက်မှုကိုဟန့်တားခြင်း - အခမဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခွန်မရှိ | WoopShop®
$13.99 ပုံမှန်စျေးနှုန်း $27.99
အရောင် စိမ်းလန်းသော အနက်ရောင် အဖြူ
အစိမ်းရောင် / M က အစိမ်းရောင် / L ကို အနက်ရောင် / L ကို အစိမ်းရောင် / S က အနက်ရောင် / S က အနက်ရောင် / M က အဖြူ / L ကို အဖြူ / S က အဖြူ / M က
ကျောပိုးအိတ်မဲ့အကျီင်္င်္ီင့်အစင်းအမျိုးသမီးများအတွက်အစေ့ - အစိမ်း / M backordered နှင့်အဖြစ်မကြာမီကြောင့်ပြန်စတော့ရှယ်ယာဖြစ်သကဲ့သို့တင်ပို့ပါလိမ့်မယ်။
ထိပ်အမျိုးအစား: Tank ထိပ်
အလှဆင်: Hollow Out
SIZE / CM တွေဆီကနေ အရှည်
မှတ်စု: တင်းကြပ်စွာအရွယ်အစားကိုရွေးဖို့အရွယ်အစားဇယားအတိုင်းလိုက်နာပါ။ သင့်ရဲ့အလေ့အကျင့်အရသိရသည်တိုက်ရိုက် select လုပ်မထားပါနဲ့။ လက်စွဲတိုင်းတာမှုကြောင့်အရွယ်အစား ၁-၃ စင်တီမီတာကွာခြားနိုင်သည်။ သင်တိုင်းတာသည့်အခါသတိပြုပါ ဤပစ္စည်းတွင်အချို့သော elasticity ရှိပြီးပစ္စည်းနှင့်ဓာတ်ပုံများအကြားကွာခြားမှုအနည်းငယ်ရှိသည်။
45 ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအပေါ် အခြေခံ.
ကိုယ့်အဘို့လိုအပ်သောနေ့၌ထက်နည်းနှစ်ပတ်အတွင်းရောက်ရှိလာ! ဒါကြောင့်ဒီဟာကိုနှစ်သက်တယ်၊ အရည်အသွေးကောင်းတယ်၊ ပစ္စည်းကောင်းတယ်၊ ပုံနဲ့တူတယ်။